macruufka 9 Data Recovery: Sida loo soo ceshano Khasaaray Xogta laga macruufka 9 Qalabka r
iPhone waa mid ka mid ah casriga ugu caansan suuqa. Waxay kale oo ay caan ku ah oo tayo leh, xawaaraha iyo wax badan oo ka mid ah barnaamijyadooda users bixi karto App Store ah. Qaybta ugu muhiimsan ee iPhone kasta waa nidaam ay hawlgalka (OS). Nasiib wanaag, Apple sameeyey OS wacan u smartphone this. Version ugu dambeeyay, macruufka 9 waxay keentaa dhowr horumarin oo ka dhigi waxa ka sii fiican oo user-friendly dheeraad ah.
Qaybta 1. Sidee dadka sida caadiga ah laga badiyay xog ku saabsan arrimo ay 9 qalab
Sida sheegnay, macruufka 9 waa mid ka mid ah nidaamyada hawlgalka ugu wanaagsan ee casriga ah ee caalamka. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sidoo kale waxay leedahay cillado gaar ah oo keeni kara khasaare xogta. Tani waa dhibaato halis ah oo waa ay dhici kartaa in qof. Haddii ay taasi kugu dhacay mar hore, adigu waad garanaysaa sida dhibaato weyn ay tahay. Waxaad ku waayi kartaa fariimaha, sawiro, videos, qoraalada iyo macluumaadka gaarka ah ee kale. Maanta, dadka isticmaala badan oo xogta ku leeyihiin casriga ah, sababtoo ah waxay u isticmaalaan muddo ku dhow wax walba. Taas ayaa ka dhigaysa xaaladda sii xun. Si looga fogaado badiyay xogta aad, waa in aad u ogaato sida aad u lumin karo iyo sida looga hortegi karo.
Takhalusid xogta aad, si qalad ah, waa sababta ugu badan ee guuldarro xogta.
CUSBOONAYSIINTA macruufka yahay sida caadiga ah aan dhib lahayn oo uu socdaa labo daqiiqo. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood waxa ay musuqmaasuqa kartaan kaydinta gudaha ee aad iPhone oo dhan xogta musuqmaasuq ku yaal.
Marar dhif ah qaarkood, macruufka dhaawacmi kartaa si aad sidoo lumin doonaa xogta.
Fayrasyada iyo furin waa dhibaato halis ah haddii aad ku qaataan waqti badan ka eegay internetka.
Qaybta 2. 3 siyaabood oo loo rertieve files tirtiray ka macruufka 9 qalabka
Waxaa laga yaabaa in laga badiyay xogta aad ka dhawaajiyaan ku tacaluqda, laakiin waa dhibaato wayn oo saamayn xun ku shaqada iyo nolosha bulshada. Waxaad lumin doonaa xiriirada, fariimo iyo sawiro muhiimka kuu ah. Nasiib wanaag, waxa jira siyaabo dhowr ah oo kaa caawin karaan in aad xaliso dhibaatada. Saddex, siyaabaha ugu badan waxay kala yihiin:
Kabsado xogta laga gurmad Lugood.
Kabsado xogta laga gurmad iCloud.
Isticmaal macruufka Data Recovery Program.
Laakiin, waxaa jira hab kale oo wax ku ool ah ka badan yahay oo si dhakhso ah. Wondershare Dr.Fone Ee macruufka mar hore ka mid ah dadka isticmaala lahaa kuwa inuu ka soo kabsado xogta ay caan. Barnaamijkan waxa faa'iido leh marka aad si qalad ah u tirtirto xogta ama aad qabto dhibaatooyin la macruufka ah 9. qaababka ugu wanaagsan ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka waa:
Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in guji dhowr jeer oo aad mouse kombiyuutarka iyo xogta aad u soo baxo.
Waxaad ka qalab kasta oo ku kharribeen soo celin karo xogta.
Waxaad dooran kartaa gudbiyo aad rabto in aad soo kabsado iyo adiga oo aan samayn.
Waa arrin aad u degdeg ah.
Jidka 1aad: si toos ah Ladnaansho xogta aad ka macruufka 9 qalab
1. Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Habka loo xirxiro waa u fududahay inuu sameeyo oo uu socdaa dhowr daqiiqo. Connect aad casriga ah si ay u Wondershare Dr.Fone computer iyo qado. Waxaa loo sheegi doonaa in aad in aad iPhone xiran yahay oo aad awood u yeelan doonaan in ay arkaan nooc (iPhone 5, 6 iyo iwm).
2. Click "bilaabaan" iyo software iskaan doonaa qalab aad u files laga badiyay. Marka la sameeyo, waxaad arki doontaa liiska dhammaan faylasha, Wondershare Dr.Fone ee macruufka soo celin karaa. Liiska waxaa ka mid ah farriimaha, videos, taariikhda wac, sawirada iyo wax badan oo dheeraad ah.
3. waxaad u baahan tahay inaad samayso waa inaad kala dooran faylasha aad rabto in la soo celiyo. Xusuusnow in faylasha lagu hubiyaa in lagu soo celin doonaa. Sidoo kale, waxaad ka arki kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan files kuwa. Hadda, guji "kabsado" oo aad samaysay. Waxay caadi ahaan qaadataa daqiiqado yar oo aad samaysay.
Jidka 2aad: Xulo soo kabsado macruufka 9 xogta laga gurmad iCloud
1. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka 9 inuu ka soo kabsado xogta aad ka iCloud. Sida aad ogtahay, waa in aad kala soo bixi iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka 9. Waxaad u baahan doontaa labo daqiiqo si ay tan u sameeyaan. Connect qalab macruufka la your computer iyo abuurtaan Wondershare Dr.Fone ah. Gudaha gal in aad xisaabta iCloud. Waa in aad ogaato in ID Apple iyo password la ilaaliyay oo qofna garan karo.
2. software ayaa ka heli doontaa dhammaan hayaan iCloud aad badbaadiyey. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in la garaaco badhanka download oo iyaga ka soo dejisan in your computer. Waxaa lagu talinayaa inaad kala soo baxdo gurmad ugu dambeeyay oo ka mid ah la files ugu. Marka download waa dhameystiran, riix badhanka la mid ah lagu soo saaro files.
3. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, waxaad ku eegaan karo files qaarkood. Dhammaan xogta, oo laga helay gurmad iCloud ee la soo celin karin. Haddii aadan rabin in la soo celiyo fariimaha ama faylasha gaar ah, kaliya iyaga uncheck. Xusuusnow in degsado iyo soo saarida waqti ku xiran tahay tirada ah gurmad ah. Haddii aanad haysan wakhti ku filan, ama xidhiidh aad internet yahay mid gaabis ah, uncheck files aadan rabin inuu ka soo kabsado. Marka aad dhamaysid, guji oo kaliya "kabsado" oo sug Wondershare Dr.Fone ee macruufka u dhamayso.
Jidka 3aad: Xulo soo kabsado macruufka 9 xogta laga gurmad Lugood
1. Wondershare Dr.Fone ee macruufka uu leeyahay qorshe kale u soo celinta xogta aad. Waxaa la soo celinta kaga imaanayo Lugood. Nidaamku wuxuu yahay mid aad u fudud oo la mid ah ka duwan oo hore. Connect qalab aad la your computer iyo abuurtaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Dooro " kabsado Lugood gurmad file "barnaamijka aad ku tusi doonaa oo dhan hayaan in la heli karo iyo.
2. Dooro file gurmad aad rabto iyo guji "Ka bilow scan". Ka dib baaritaan ay dhamaato, waxaad heli doontaa liis dhamaystiran oo files in ay diyaar u yihiin soo kabsaday. Dhammaan faylasha lagu qaybsan doono qaybaha. Inta badan dadka isticmaala celinta fariimaha , wac taariikhda, sawiro iyo videos waa waxa ugu muhiimsan. Nasiib wanaag, dhammaan qaybahan waxaa taageera.
3. Hadda, waxaad dooran kartaa faylasha aad rabto in aad soo kabsado. Haddii aad rabto in aad soo kabsado dhammaan faylasha, kaliya calaamadee dhammaan qaybaha meesha files yihiin oo guji "raysashada" badhanka. Ka soo kabashada sida caadiga ah dhowr daqiiqo ee ugu danbeysay. Marka la sameeyo, waxaad yeelan doontaa xogta aad ku your computer. Haddii aad u baahan tahay file u gaar ah, oo aad isticmaali karto "baadh" doorasho. Intaa waxaa dheer, waa in aad uma xusuusan in barkinta qalab halka kabashada waa in horumarka. Kaliya marka lagu sameeyo, waxaad ka computer ka saari karto barkinta qalab aad.
Bedelka Xiriirada ka iPhone in iPad Si fudud oo fudud
> Resource > iPhone > macruufka 9 Data Recovery: Sida loo soo ceshano Khasaaray Xogta laga macruufka 9 Qalabka